စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတာ ဘာလဲ? သင့်အတွက် ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ? | Mycanvas
စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတာ ဘာလဲ? သင့်အတွက် ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ?
သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းက သင့်ရဲ့ အမြင့်ကို သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မယ်။
ခိုင်မာတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိဘဲ ဘယ်အရာကိုမှ တည်ဆောက်လို့ မရပါဘူး။ “A” သည် အောင်မြင်သူတိုင်းကို ရပ်တည်ပေးမည့် Attitude အတွက်ဖြစ်သည်။ စိတ်နေသဘောထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်တိုင်၏ “ရှေ့တန်းလူ” ဖြစ်သည်။
အမြစ်များသည် အတွင်းပိုင်းသို့ ပြန့်နှံ့သွားပြီး ယခင်အတွေ့အကြုံများတွင် ကျောက်ချရပ်နားထားကာ အသီးအခက်များသည် အပြင်ဘက်တွင် ပွင့်နေပါသည်။ သဘောထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားများထက် ပို၍ရိုးသားပြီး ကိုက်ညီပါသည်။
၎င်းသည် လူများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆွဲဆောင်ရန် သို့မဟုတ် သူတို့ကို တွန်းလှန်သည့် အပြုအမူဖြစ်သည်။ ထုတ်ဖော်မပြဘဲနဲ့ ဘယ်တော့မှ ကျေနပ်စရာမရှိပါဘူး။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်၏ စာကြည့်တိုက်မှူး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းပြောသူနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်၏ ဆရာဖြစ်သည်။ သို့တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားကို မည်သူက ထိန်းချုပ်သနည်း။
သင့်သဘောထားသည် သင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွင်း 100% ဖြစ်သည်။ ဘဝမှာ ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို တုံ့ပြန်ပုံ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှသည် ကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်သည့်ပုံစံကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင် လူများစွာသည် အခြားသူများ၏ တုံ့ပြန်မှုများကို တစ်နေ့တာအတွက် ၎င်းတို့၏အမြင်ကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးကြသည်။ အဲဒါကို စဉ်းစားပါ။ သင်ဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အောင်မြင်တဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ ငြင်းပယ်ခံရမှုတွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုကို သင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ညည်းညူနေသလား ဒါမှမဟုတ် ထိန်းချုပ်ဖို့၊ အာရုံစိုက်နေဖို့၊ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို လက်ခံပြီး သင့်ဘဝကို ရှေ့ဆက်နေသလား။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကဲဖြတ်မှုပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အကဲဖြတ်မှုဟာ အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံကို ရအောင်ယူနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက ကျရှုံးခြင်းပါပဲ။ တစ်ကြိမ်အောင်မြင်ဖို့ မကြာခဏ ကျရှုံးနေရမယ်။ ဤအရာနှင့် သင်တုံ့ပြန်ပုံသည် သဘောထားကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။
သင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ၊ သင်ဘယ်လိုထင်သလဲ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အရာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာ သင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းကနေ သင့်သဘောထားနဲ့ ပုံဖော်ထားပါတယ်။ သင့်သဘောထားသည် သင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွင်း 100% ရှိကြောင်းကို ဦးစွာနားလည်သဘောပေါက်ပြီး ယင်းသဘောထားကို ထင်ဟပ်ရန်၊ အတည်ပြုရန်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ရန် သင်ယူပါ။
ကိုယ့်အပေါ်ထားရှိတဲ့ သဘောထားကို မြှင့်တင်ရမယ်။ အချိန်နှင့်ငွေကို ချွေတာရင်း သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ကြောက်ရွံ့မှုကို ကျော်လွှားရန်နှင့် ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ကျရှုံးမှုများကို ရင်ဆိုင်ရန် သင်ယူပါ။
သင့်အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် သင့်သဘောထားက ဘယ်လိုလဲ။ သင့်မှာ ပိုင်ရှင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် သင်သည် အဘယ်အရာနှင့် ကွဲပြားမည်နည်း။ မင်းဘာလို့မလုပ်တာလဲ။
သင်သည် ဤပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ရှေ့သို့မသွားနိုင်မီ ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ရှိရမည်။ မဟုတ်ရင် အဆိုးမြင်စိတ်က သင့်သဘောထားကို ထင်ဟပ်နေပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားနဲ့ ပုံဖော်ထားပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အဖွဲ့၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် သင်ကိုယ်စားပြုသောအဖွဲ့အစည်းကို သင်မယုံပါက သင်ယုံကြည်တဲ့အရာကို ရှာဖွေဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။
သင့်ရဲ့သဘောထားက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ယုံကြည်ဖို့ တခြားသူတွေကို ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တိုးတက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား???